Ungazikhetha njani iitshaneli zedijithali zeTV ngeantenna
Ngu-Danny Briere, Pat Hurley
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zegabapentin
Thatha iitshaneli zedijithali zeTV (ATSC) ngokudibanisa i-eriyali kwaye uyilungelelanise kubasasazi bendawo. Sebenzisa i-eriyali ukukhetha amajelo e-TV edijithali kusebenza kakuhle ukuba uhlala kwisixeko esikhulu; Ingathatha ixesha ukuba uhlala kwidolophana encinci. Iindleko zokufaka usasazo olutsha kunye nezinye izixhobo zesikhululo sosasazo ukwenza i-ATSC ziphezulu, ke izixeko ezincinci zinobunzima ekunikezeleni umsebenzi kunye nokufumana izixhobo zokwenza.
Ngaphambi kokuba uqale utyalomali kwi-eriyali, jonga abasasazi bendawo yakho kwaye ubone ukuba ngubani oneziteshi ze-ATSC ezisebenzayo. Ungajonga kwi-Intanethi I-HDTV Pub . Chwetheza nje ikhowudi yakho ye-zip kwaye ufumanise ukuba ngubani osasaza kwindawo yakho. Umthetho ufuna ukuba ezi zikhululo zeTV zisasaze kwi-ATSC, hayi i-HDTV. I-HDTV siseti esezantsi ye-ATSC.
Unokukhetha kuzo zombini i-eriyali zangaphakathi nangaphandle. Ii-eriyali zangaphakathi zisebenza kakuhle ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba uhlala kwindawo eneempawu ezinkulu eziza emoyeni, kodwa uninzi lwabantu lufumana iziphumo ezingcono ngee-eriyali zangaphandle. I-eriyali zangaphandle zahlulwahlulwahlulwa ngokwamacandelo amathathu:
Ubukhulu: I-eriyali ye-ATSC ilingana namaqela amancinci, aphakathi kunye amakhulu.
i-serotonin-norepinephrine yokuphinda ithathe inhibitor
Isikhokelo: Ezinye ii-eriyali (zemultidirectional) zinokuthatha imiqondiso evela kuyo nayiphi na ikhampasi, ngelixa ezinye (ezalathisa) kufuneka zijolise kumqondiso ongenayo.
Ukwandiswa: Uninzi lwee-eriyali azicaciswanga (oko kuthetha ukuba azinayo i-booster yesandi ye-elektroniki), kodwa kwiimpawu ezibuthathaka, ezinye ii-eriyali zisebenzisa encinci preamplifier ukonyusa imiqondiso kunye nokunceda i-tuner yakho ye-TV igqibe.
Ukucwangciswa kwe-HDTV engaphezulu-moya kunokuba nzima. Iindaba ezimnandi zezokuba usasazo lwedijithali lusimahla kwikhephu, ukuphela, kunye nezinye izinto ezenza usasazo lwe-analog TV luphazamise. Iindaba ezimbi kukuba endaweni yezi zinto ziphosakeleyo, usasazo lwedijithali lukhona (luyasebenza) okanye lucimile (akukho nto, nada, zip). Akusoloko kungumcimbi wokuba kude kakhulu nenqaba yosasazo. Amanye amakhaya anokungafumani mqondiso kuba zikufutshane kakhulu nenqaba yosasazo okanye zibekwe emva kwenduli.
Umbutho wezoMbane zabaThengi (i-CEA) uphuhlise inkqubo enkulu yokukunceda wazi ukuba loluphi uhlobo lwe-eriyali oyifunayo ukuze ufumane imiqondiso ye-ATSC ekhayeni lakho. Yiya e IWebhu yeWebhu , Chwetheza ulwazi oluphambili lweedilesi, kwaye ugcino lwedatha ikukhuphela iingcebiso ze-eriyali. I-CEA ikwanayo nenkqubo yokufaka iikhowudi kwimibala eveliswa ngabenzi be-eriyali ngaphandle kweebhokisi zabo ukuze ukhethe ekunene kwivenkile.
ipilisi yokugulisa ipenicillin ndingayithatha i-amoxicillin
Uluhlu njani kuluhlu lwecraigslist
kukhuseleke kangakanani ukuthatha ibuprofen
strattera umhla wokukhululwa oqhelekileyo
uyicoca njani i-ur laptop screen
ukuzilolonga kwamagxa angaphandle
umthamo we-benadryl wokulala